‘धोखादिनु पाप हो’ भन्दै यी युवकले गरे यी दुई युवती संग एकै चोटी एउटै जग्गेमा बिहे …. | Rochak
September 8, 2021 NepstokLeaveaComment on ‘धोखादिनु पाप हो’ भन्दै यी युवकले गरे यी दुई युवती संग एकै चोटी एउटै जग्गेमा बिहे ….
भारतको छत्तिसगढको बस्तरमा एक जनाले एकै पटक दुई जनासित विवाह गरेका छन् । यो विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । टिकरा लोहंगा गाउँमा विवाह सम्पन्न भएको हो ।
गाउँमा चन्दू माैर्य नाम गरेका युवाले एउटै मण्डपमा दुई जनासँग विवाह गरेका हुन् । मुरिया जनजातिका चन्दूले आफूले दुवै जनासित प्रेम गरेकाले धोका नदिन दुवैसँग विवाह गरेको बताएकाे बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ ।उनले भनेका छन्, ‘मैले दुई जनासँगै प्रेम गरेको थिएँ, कोही एक जनालाई धोका दिन सक्दैन थिएँ, मनमा केही प्रश्न थियो तर विवाहका लागि दुवै जना राजी भएपछि विवाहका लागि म पनि तयार भएँ ।’
छत्तिसगढका केही जनजातिमा सामान्य विधि पूरा गरेपछि विवाहअघि नै युवा–युवतीसँगै बस्न पाउँछन् । विवाहका लागि चन्दूले कार्डसमेत छपाएका थिए । जसमा दुवै जना बेहुलीको नाम लेखिएको थियो ।
सर्व आदिवासी समाजका नेता प्रकाश ठाकुरका अनुसार तीनै जना बालिग छन् । उनीहरू तीनै जना आदिवासी समाजका हुन् । यो समाजमा बहुपत्नी प्रथामा कुनै राेक छैन । त्यसमा पनि आदिवासी समाज पनि यो विवाहमा खुशी छ । उच्च अदालतका अधिवक्ता प्रियंका शुक्लाका अनुसार यो विवाहलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । आदिवासी जनजातिको परम्परा र संस्कृतिभित्र पर्ने भएकाले यस्ता विवाहलाई कानुनले नरोक्ने उहाँको भनाइ छ
मन्दिर गएको सपना देख्नुहुन्छ ? यस्तो सम्म हुन सक्छ !